XOG DAAWO VIDEO: Culimada Puntland, ‘‘Waxay aheyd in Meydka la aaso inta aan Xilka laga qaadin Dhoobo Daareed‘‘! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG DAAWO VIDEO: Culimada Puntland, ‘‘Waxay aheyd in Meydka la aaso inta...
Sheekh Daahir Aw-Cabdi oo ka mid ah Culimada Puntland
Garoowe (Halqaran.com) – Culimada Puntland ayaa khudbaddii Jimcaha maanta uga hadlay dhacdadii ka dhacday Baarlamaanka Puntland, taasi oo sababtay Dhimasho iyo Dhaawac.
“Riditaankii guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Dhoobo-Daareed deg-deg baa kujirey, dhaawacii oo yaal dhimashadii oo taal baa la ridey horta inaan maydka aasno sow ma suubanayn.” Ayuu yiri Sheekh Daahir Aw-Cabdi
XOG XASAASI: JUBBALAND oo si lama filaan ah uga hadashay ciidankii la sheegay inay ka goosteen! (Maxa cusub?)
Sheekhu wuxuu kaloo sheegay, inaanu Madaxweyne Siciid DENI Joogin doonin Xilka, Wuxuuna ku booriyey Bulshada inay la shaqeeyaan.
Sidoo kale Sheekh Daahir Aw-Cabdi ayaa yiri, “Reer Puntland waxaan leeyahay Madaxweyne Siciid idinkoo indhaha kala haya baad duhur cad doorateen 4 sano baa u dhiman boqor maaha isagaa madaxweyne ka ah wadanka inta uu joogo, waxyaabaha la sheeg sheegayo raali kama nihin, dhacdadii baarlamaanka waxaa kujirey degdeg xabadu xal maaha.”.
Dhinaca kale Wuxuu khudbadiisa uga hadlay Arimo kala duwan oo la Xiriirta Xaalada Soomaaliya, Wuxuuna Fariin muhiim ah u diray Maamullada iyo DF Soomaaliya ee uu madaxweyne ka yahay Farmaajo.
Sheekh Daahir Aw-Cabdi ayaa xusay in Soomaaliya ay hadda heshay Dawlad Fiican, oo Dalka dibadiisa si wacan uga dhaqan gashay, Balse gudaha ay dagaal kula jiraan Siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed, wuxuuna ku baaqay in la garab galo Dawladda.
Halka hoose ka daawo Muuqaalka Sheekh Daahir Aw-Cabdi:
DAAWO VIDEO: Kacdoono ka dhan ah Puntland oo ka bilowday bariga Sanaag, ‘Puntland yey ku tashan Sanaag’!
xil ka qaadistii Dhoobo Daareed
axmed November 8, 2019 At 20:23
Kani, ma Al Ictisaam buu ka tirsan yahay, walee waxa idin rogayaa waa kaas oo kale, waa far dheeraatay, Munaafaq.
axmed November 9, 2019 At 14:39
Culumo ma aha kuwaan, waa qas wada yaal, waxa ay jecelyihiin, in ay wax kasta war ka keenaan. hala garaaco Xaaraanta